Soo -saaraha Silsiladda Guddiga ugu Fiican iyo Warshadda | GOJON
Isku -darka wareejiyaha silsiladda Guddiga iyo wareejiyaha Wareegga ayaa si dabacsan u geyn kara warqadda duubka meesha loo baahan yahay, waxayna leedahay hufnaan sare, taas oo si weyn u yareyneysa xoogga shaqada waxayna kordhisaa dabacsanaanta dhammaan habka gudbiyaha duudduubka warqadda. Nidaamka gaadiidka duudduuban ee garaadka leh ayaa inta badan mas'uul ka ah gaadiidka iyo maareynta warqadda duudduuban ee looga baahan yahay xarigga jiingadda.
● Qaab-dhismeedku: wuxuu ka kooban yahay silsilado badan oo nooca v-ka ah, farsamaynta gudbinta daboolka iyo jir iyo laad iyo midig oo pneumatic ah; silsiladda looxa v-qaabeeya waxay ka kooban tahay saxan v-qaabeeya iyo sita rogid, xagal saxan v-qaabeeya waa 170 digrii, ballacuna waa 250mm;
Re Hoos -u -dhiska Gawaarida: 2.2kw;
Speed ​​Xawaaraha silsiladda guddiga: ugu badnaan 20m/min, beddelaha soo noqnoqda, waa la beddeli karaa;
Material Alaab -daboolid: 45 bir, la demiyey ka dib demintii iyo kulaylkii;
Bearing Raadintu waa astaanta FK, rackkuna wuxuu ka samaysan yahay sunta rasaasta iyo subagga si loo fududeeyo;
Oil Saliida marsho ee matoorka ku habboon waa iso vg220 saliid;
Load Culeyska ugu badan ee duubka warqadda ah: 3 tan;
● Ka dib marka la dhammeeyo jir -dhiska aasaasiga ah iyo qaansada, dhammaan qalabka ayaa si toos ah loogu rakibay goobta. Imtixaanka ka dib, saxanka daboolka waxaa lagu hagaajiyaa boolal birta ka samaysan iyo qaansada jir, taas oo ku habboon dayactirka iyo dayactirka shirka kadib;
Section Qeyb kasta oo ka mid ah wareejiyaha silsiladdii asalka ahayd waxay kaydin kartaa 1 ama 2 koob oo duudduuban oo xaashiyo ah iyadoo lagu jiro xaalado taagan. Marka la eego calaamadda ka timaadda marinka xarriiqa ah, warqaddii asalka ahayd si toos ah ayaa loo laaday, taas oo aad wax ugu taraysa hagaajinta xawaaraha gaadhiga;
In la yareeyo khasaaraha warqadda duuban oo la yareeyo kharashka socodsiinta;
Alize Xaqiiji hawlgalka tooska ah ee aan duuliyaha lahayn.
Hore: Nidaamka Gaadiidka Duubista Baabuurka
Xiga: Gawaarida Wareeji
Nidaamka Rullaluudlaha, Bangiga Erp, Gawaarida Xamuulka qaada, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, A3 Faylka Waraaqda,